C Frame Mechanical Press Abakhiqizi & Abahlinzeki - China C Frame Mechanical Press Factory
ST Series C Uzimele Single Crank Mechanical Cindezela
Izici zokusebenza okuyinhloko: Ukuqina komzimba (ukusonteka) 1/6000. Sebenzisa i-OMPI pneumatic clutch eyomile kanye ne-brake. Isilayida samukela indlela yomhlahlandlela enamacala amabili ayisithupha, futhi umhlahlandlela wesilayida usebenzisa "ukuqina kwemvamisa ephezulu" kanye "nenqubo yokugaya ujantshi": ukugqoka okuphansi, ukucacisa okuphezulu, isikhathi sokugcina ngokunemba, nempilo yesikhunta ethuthukisiwe. I-crankshaft yenziwe ngezinto ezinamandla amakhulu ze-alloy 42CrMo, enamandla aphindwe ka-1.3 kunensimbi engama-45 futhi inempilo yenkonzo ende. I ...
Uchungechunge lwe-STX C Uzimele owodwa we-Crank Mechanical Press
Izici zokusebenza okuyinhloko: Ukuqina komzimba (ukusonteka) 1/6000. Sebenzisa i-pneumatic wet clutch brake, ukuvikelwa kwemvelo, akukho ukungcola, umsindo ophansi, impilo ende yokusebenza. Isilayida sisebenzisa izindlela ezimbili zomhlahlandlela ezinamacala ayisithupha, futhi isiqondisi sesilayida sisebenzisa "ukuqina kwemvamisa ephezulu" kanye "nenqubo yokugaya ujantshi": ukugqoka okuphansi, ukunemba okuphezulu, isikhathi sokugcina ngokunemba, nempilo yesikhunta ethuthukisiwe. I-crankshaft yenziwa ngezinto ezibonakalayo ezinamandla amakhulu i-42CrMo, okuyizikhathi eziyi-1.3 str ...
Uhlobo lwe-STC Series C “Vula i-Double Point Crank Precision Punch Press”
Izici zokusebenza okuyinhloko: Ukuqina (ukusonteka) komzimba nesilayida kungu-1/6000. Sebenzisa i-OMPI pneumatic clutch eyomile kanye ne-brake. Isilayida sisebenzisa izindlela ezimbili zomhlahlandlela ezinamacala ayisithupha, futhi isiqondisi sesilayida sisebenzisa "ukuqina kwemvamisa ephezulu" kanye "nenqubo yokugaya ujantshi": ukugqoka okuphansi, ukunemba okuphezulu, isikhathi sokugcina ngokunemba, nempilo yesikhunta ethuthukisiwe. I-crankshaft yenziwe ngezinto ezinamandla amakhulu ze-alloy 42CrMo, enamandla aphindwe ka-1.3 kunensimbi engu-45 futhi ineside ...